ABUURI BARADHO HOOSTA VIDEO - BATAATO BEERTO KA YAR CAWS
Ugu Weyn Ee Bataato beerto ka yar caws
Beerto fiican iyo baradho soo koraya ka yar caws + video
Qof walba waa ogyahay in baradhada beerto ay tahay mid aad u adag, dabcan ma jiro wax isbarbardhigaya qajaarka ama yaanyada, laakiin waa inaad leexisaa dhabarka dhabta ah. Si taxadar leh u qodo dhulka ayaa la qodi doonaa oo la daaqi doonaa godadka, wax lagu beero iyo bacriminta ayaa la dhigayaa mid kasta oo ka mid ah. Intaa waxaa dheer, si aad u hesho dhalidda la doonayo, waxaa lagama maarmaan ah in cawska iyo baradho, iyo haddii uu jiro xagaaga qallalan, waxaad u baahan doontaa waraabin dheeraad ah. Bataashka beeraha sidoo kale waa shaqo waqti-dheer, oo lagu daray dadaal dheeraad ah oo loo baahan yahay si loo nadiifiyo wasakhda.
Laakiin, dad yar ayaa og, waxaa jiray hab kale oo beerto baradho ah, iyo, nasiib daro, meel kasta oo ay joogaan, waxay iloobeen. Qaar ka mid ah 150 sano ka hor, habkani wuxuu ahaa mid caadi ah. Farmashiyeyaasha, oo aan wax badan dhibsan, waxay ku tuureen caleemo ama khudradda cagaaran ee barandhiga gacanta. Oo, ugu yaraan, dadka beeralayda ah ayaa xagaaga ka tagay bilaash wixii waxyaabo kale ah, mana jirto baahi loo qabo in la arko beerta barafka xagaaga. Baradhadu uma baahna jaridda ama hilling, beergooyska ayaa fiicnayd. Si kastaba ha ahaatee, ururinta iyo kacdoonka milatari ayaa ka lumay dadka qayb muhiim ah aqoonta naftooda iyo adduunka ku wareegsan, iyo habkan beeritaanka baradhada ayaa ku dhawaaday. Kaliya waqtigeena, habkii hore ayaa nagu soo noqda, waxaan xiiseyneynaa helitaanka iyo waxqabadka. Marka laga reebo xaqiiqda ah in straw waa bacriminta dabiiciga ah cajiib ah.
Waa maxay sababta dhabta ah caws?
Waa maxay sababta cowsku u kobcaan koritaanka baradhada? Marka qallajin, waxaa si daacad ah u saturates dirxiga iyo jeermiska oo ku jira ciidda, sidaas Baradhadu waxay helayaan wax kasta oo aad u baahan tahay horumar.
Xaaladaha ugu muhiimsan ee lagu beeray baradhada cows
Waxaa laga yaabaa inay tahay xaaladda ugu weyn ee guusha ama guul darrida "mashruuca baradho" waa joogitaanka qadar ku filan oo caws. Intee ayey u baahan tahay? Meelaha soo degaya waa in lagu daboolaa lakabka qiyaastii 50 cm qaro weyn. Haddii ay ka yar tahay qadarka loo baahan yahay - ciidda ayaa qalajin doona, in ka badan - ciidda si fiican uma diirin, koritaanka baradho ayaa hoos u dhigi doonta. Intaa waxaa dheer, ma isticmaali kartid cufan, caws engegan, waa lagama maarmaan in la kariyo. Haddii kale, ma maqnaan doonto kobcinta, iyo waxay ka sii dari doonaan gaaska iyo biyaha is waydaarsiga.
Beerta ciidda ka hor intaan la beeriin cutter ama flatolooga ilaa 5 cm qoto dheer iyo 10-15 cm ballaaran waxay kordhisaa xayawaanka ciidda iyo, sidaas awgeed, dhalid.
Carrabku waa inuu noqdaa mid qoyan. Haddii aad gacanta ku dhejisid cawska si loo beeray baradho la beeray ma dareemaan qoyaan - waxaad u baahan tahay inaad biyo ku caawiso inaad jebiso sprouts.
Wixii beeritaanka, isticmaal baradhada varietal, ama, waa maxay xalka ugu fiican, noocyo farsamo. Ha cunin barandhada cuntada lagu iibsado dukaanka.
Caws maahan? Waxaad ku dhejin kartaa jajab weyn, natiijadu waxay noqon doontaa mid daciif ah, laakiin sidoo kale waa la ogaan karaa.
Meelaha leh jawi qalalan kulul, bannaanka u si guul leh beddeli cows ka cawska iyo caleemo, ma ilaawin si loo kordhiyo inta jeer ee waraabinta.
Habka beeritaanka baradho ka yar caws
Ma jirto baahi loo qabo in la qodo dhulka: baradho loogu talagalay beerto, horay loo soo xulay oo waxoogaa bislaaday, ayaa lagu dhajiyaa safka midigta dusha sare ee dusha sare, daboolay cawska sare. Miisaanka lakabka waa 40-70cm.
Suurtagal dheeraad ah oo suurtogal ah in ay saameyn ku yeelan karaan goosashada mustaqbalka:
Waxaad ku daadi kartaa cantoobo dhulka ah oo lagu qasi karo Bacriminta on top of tuber (isticmaali dambas iyo digada). Tallaabadan noocan oo kale ah ayaa ka ilaalin doonta digriiga nooc kasta oo cudurro ah.
caws, sidaas darteed dabayshu ma kala firdhin, sidoo kale waxaa laga yaabaa in wax yar la rusheeyey dhulka.
Faa'iidooyinka beerto baradho ah caleen
dhulka hoostiisa cawsku wuu qoyan yahay xitaa dhul engegan;
jajabin, caws buufiyaa carbon dioxide, faa'iido leh baradhada;
Sidoo kale, in cawska cufan, waxaa jira dhalmo firfircoon ee microorganisms iyo Gooryaanka, taas oo, marka, waxay leedahay saameyn togan ku saabsan horumarinta digriiga baradho.
Faa'iidada daryeesha goobta:
Ma jirto baahi loo qabo in la googoosto barafka beeraha.
Lamaanayaashii Colorado waxay noqon doonaan kuwo ka yar, tirada dadka martida ah ee aan la martiqaadin waxay saamayn ku yeelan doonaan "milkiilayaasha" cawsku ku kala firirsan yahay goobtii, ama halkii cayayaanka ku dhex nool.
Faa'iidada muddada dheer
Sababtoo ah isticmaalka joogtada ah ee cawska goobta, koritaanka bacriminta ciidda ayaa noqon doona muuqaal, iyo, si waafaqsan, in dhowr sano ah dhalidda ee baradho kordhin doonaa. Maxaa muhiim u ah, mahadsanaanta bacriminta bey'ada u ah.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan daryeelka iyo beeritaanka toon
Baradhada la kariyey uma baahnid in la nadiifiyo dhulka dhoobo. Wax walba waa nadiif iyo dhaqso. Oo, tan iyo baradho waa qalalan, ka dibna waxaa lagu kaydin doonaa, si cad, iyo sidoo kale.
Sida loo goosanayo
Marka xilliga dayrta yimaado oo dusha sare ee baradkuna uu soo baxo, kaliya waa in loo baahnaado goosashada. Baradhadu waxay ku koraan sidan oo kale waa dhadhan fiican iyo jajab.
Xalka suurtagalka ah ee la'aanta caws
Haddii arinta cawsku ay adag tahay oo aysan jirin meel ay ku qaadato, tiro ku filan, isticmaal habkaas, laakiin waxooga badaleyso, si fudud u kora cawska aaggaaga.
Meesha aad ku talo jirtid inaad beerato baradhada, kala qaybso qeybtii. Qeyb ka mid ah, ka dib barafka ayaa dhalaalay, barafka, miro iyo digirku waa isku dhafan yahay, qeybta kale - baradhada, iyadoo la adeegsanayo qaabka caadiga ah. Meelaha lagama maarmaan maaha inay xaaqaan.
Maxaa ku koray qeybtii hore, ka tago xilliga qaboobaha, iyo guga soo socda ee goobta waxaa lagu dabooli doonaa xitaa lakab oo caws engegan.
Isla markiiba on caws engegan, iyada oo aan tilling iyo qodaya, baradhada lagu beeray. In cawska dhicin sameeyaan grooves yar yar, dhig digriiga iyaga ku jira, iyo kula saydhaa ciidda ilaa 5 cm.
Qeybta labaad, halkaasoo baradho la koray habka caadiga ah, miro ayaa lagu beeray badhkoodii oo la jeexay iyo digir sanadkaan loogu talagalay cawska buuxa ee mustaqbalka.
Ku biiritaanka noocaas oo kale waxay si weyn u kordhin kartaa dhalidda baradho, si weyn u yareeyneysa wakhtiga lagu beero beeritaanka.
Qofkii maskaxday habka barandhadu u sii korodho cawska waa inaanay "dhicin ul" qaabka caadiga ah ee caadiga ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Bataato beerto ka yar caws 2019